China TNCF3-yakatevedzana 3IN INC Servo feeder muchina fekitori uye vanotengesa | Daya
1. Kugadziridza kwematanho kunotora kuverenga kwemagetsi dijitari kuverenga;
2. Yakakwira chaiyo screw inofambiswa neakanaka uye asina kunaka maviri-nzira ruoko mawheel kudzora upamhi kugadzirisa;
3. Iyo kukwirira kwetambo yekudyisa inogadziriswa nemota inosimudzwa erevheta;
4. Chivharo chehomwe chinotenderera chinodzivirira chigadzirwa chinoshandiswa kune sheet sheet;
5. Kudya roller uye kururamisa roller kunoitwa neakakwira chiwanikwa chinotakura simbi (yakaoma chromium yakanamirwa kurapwa);
6. Hydraulic yekutsikirira ruoko mudziyo;
7. Iyo giya mota inotyaira yekudyisa musoro mudziyo weinodzvanya vhiri;
8. Hydraulic otomatiki yekudyisa musoro mudziyo;
9. Hydraulic rutsigiro musoro mudziyo;
10. Iyo yekudyisa sisitimu inodzorwa neMitsubishi PLC chirongwa;
11.Iyo chaiyo yekudyisa inodzorwa neYaskawa servo mota uye yakanyanya kujeka mapuraneti servo yokuderedza;
Nekuda kwekuenderera kuri kusimukira kwetekinoroji, punch uye punch peripheral michina inoshandiswa zvakanyanya. Iko kunyorera kwechipukisi michina yekumusoro kunogona kuvandudza kugadzirwa kwehunyanzvi uye kudzikisa mutengo wevashandi, saka inofarirwa nevagadziri. Iyo yekumusoro yekushandisa punch ine yakatsemurwa feeder, zvinhu zvekushandisa, yakatwasanuka muchina, maviri mune imwechete inotwasanudza muchina, matatu mune imwechete zvinhu rack kururamisa feeder. Nhasi tichazivisa muchidimbu vatatu mune imwechete yekudyisa system.
1 Sevha nzvimbo
Iyo yekutsika yekugadzira tambo inosanganisira zvinhu rack, yekumisikidza muchina uye wekudyisa muchina. Kana michina mitatu iyi yakazvimirira, huwandu hwemuchina wega wega hausi mudiki. Zvakare, kuitira kuti uve nechokwadi chekugadzirwa kwese, panofanirwa kuve nenzvimbo yekumirira pakati pemuchina nemuchina. Naizvozvo, iyo yepasi nzvimbo yemutsara wekugadzira unogona kufungidzirwa. Kazhinji, pane nzvimbo shoma yasara mushure mekunge michina yaita waya, izvo zvinoita kuti zvinyanye kunetsa kune vanofambisa kufamba Batsirwa. Iwo matatu mune mumwe feeder anosanganisa iwo matatu michina kuita imwechete. Iyo fuselage iri compact, uye iyo nzvimbo yepasi inoderedzwa neinopfuura hafu ichienzaniswa neyechinyakare yakazvimiririra yakazvimiririra yekutsika yekugadzira tambo, kuitira kuti nzvimbo yemusangano ishandiswe zvizere, uye vanoshanda zvakare vane yakakwana nzvimbo yekushanda, iyo isingazokonzeresa kusagadzikana kwekushanda, uye kuwedzera kuchengetedzeka kwekutsika zvigadzirwa.
2 Kuchengetedza manpower uye simba rekushanda rakakwira
Ivo vatatu mune mumwe feeder vanongoda munhu mumwe chete kuti apedze kufudza, kufudza, kudhirowa, kugadzirisa dambudziko, kuyerwa kweforoma uye kumwe kushanda, uye nguva yakashandiswa haina kuwanda. Nekudaro, iyo yechinyakare yakasarudzika uye yakazvimiririra mhando inoda kuti yega yega seti ive yakagadzirirwa munhu mumwe chete, uye dzimwe nguva inoda kubatsirana kupedzisa mashandiro, izvo zvisina kukodzera kuponesa manpower uye nekuvandudza kushanda kwesimba.
3 Nyore oparesheni uye yakakwirira nemazvo
Iwo matatu mune mumwe feeder anotora iyo komputa kutonga system. Basa rekushanda rakanyatso tarisisa pane koni uye yekudzivirira mubato. Mumwe munhu anogona kungopedzisa kuvhiya, uko kwakanyanya humunhu. Iwo matatu mune mumwe feeder anogona kumisikidza iyo yekudyira kureba zvisina tsarukano, bata kumeso kwekumberi kweseiri kufambisa iyo data kupinda mune roller, uye mota inotyaira inodzvanya ruoko michina kudzivirira iyo coil kuti isununguke. Mishini yekutwasanudza nekudyisa iri padanda rimwe chete, uye hapana pakati pakati pemabhesi, ayo anonyatso kuvimbisa kuenderana kwebasa ravo. Inogona kudzikisira kukanganisa kwekudyisa nekugadzirisa, uye kusvika pakukumbira kwekukwirira kwakaringana, kuri kwakachengeteka uye kwakatsiga.
4 Yepamusoro degree rekutanga uye yakafara kushanda
Iwo matatu mune mumwe feeder ane compact dhizaini, iri nyore kune yepamusoro chirongwa chekugadzira chirongwa uye mushandirapamwe. Kubva pakurodha, kusasunungura kusvika pakuenzanisa uye kudyisa, seti yemaitiro inogona kupedzwa mumaminetsi mashoma nemunhu mumwe. Zviri nyore kushanda uye kushanda zvakanyanya. Iyo inokodzera kuenderera nekutsika simbi dzakasiyana siyana, kutsika, zvemagetsi, zvigadzirwa zvemagetsi, matoyi uye auto zvikamu.
5 Yakaderera kutadza chiyero uye hupenyu hwakareba
Vatatu mune imwe feeder ine yakaderera kutadza chiyero uye hwakareba hupenyu hwebasa
Pashure: Kakawanda Shanduko Yemhepo Compressor
Zvadaro: TNCF4-yakatevedzana 3IN INC Servo feeder muchina